CentOS Linux 8.4 dia misy izao ary ireto no fanovana | Avy amin'ny Linux
CentOS Linux 8.4 dia misy izao ary ireo no fanovana azy
Darkcrizt | 03/06/2021 12:23 | Nohavaozina amin'ny 14/06/2021 23:05 | Fitsinjarana
Rehefa afaka 8 volana ny kinova farany navoaka ny famoahana ny ny kinova fanavaozana vaovao an'ny fizarana CentOS 8.4 (2105) izay ny fanovana dia natao avy amin'ny Red Hat Enterprise Linux 8.4. Ity sampan'ny CentOS Linux 8 ity dia hanohy handray fanavaozana vaovao hatramin'ny faran'ny taona, izay hatsahatra izany aorian'izay hanasoavana an'i Red Hat hifantoka amin'ireo loharano ao amin'ny CentOS Stream.
Ary io dia araka ny efa noresahintsika teo eto amin'ny bilaogy amin'ny lahatsoratra isan-karazany, CentOS Stream dia hisolo ny CentOS mahazatra 8 amin'ny faran'ny taona dia azo atao ny miverina amin'ny kinova taloha amin'ilay fonosana amin'ny alàlan'ny baiko "dnf downgrade", raha misy kinova maromaro amin'ilay fampiharana mitovy ao amin'ny tahiry.
Vita ny asa hampitambatra ny anaran'ireo trano fitahirizana (trano fitahirizana), izay ahena ho takelaka (ohatra, ny anarana "AppStream" dia nosoloina "appstream"). Raha hivadika amin'ny CentOS Stream dia ovao fotsiny ny anaran'ny fisie sasany ao amin'ny lahatahiry /etc/yum.repos.d, havaozy ny repoid, ary ahitsio ny fampiasana ny sainam-pirenena "–enablerepo" sy "–disablerepo" ao amin'ny script-nao.
1 CentOS Linux 8.4 Fampisehoana vaovao lehibe
2 Sintomy ny CentOS 8.4
CentOS Linux 8.4 Fampisehoana vaovao lehibe
Ho fanampin'ireo fiasa vaovao nampidirina ao amin'ny RHEL 8.4, ny atin'ny fonosana 34 dia niova tao amin'ny CentOS 8.4 (2105), anisan'izany ny anaconda, dhcp, firefox, grub2, httpd, kernel, PackageKit, ary yum. Ny fanovana ny fonosana amin'ny ankapobeny dia voafetra amin'ny famerenanana indray sy ny fanoloana ny sangan'asa, miampy fonosana manokana an'ny RHEL toy ny redhat- *, client-intelligence, ary ny migration manager-migration * dia nesorina.
Toy ny ao amin'ny RHEL 8.4 ho an'ny CentOS 8.4, modely fanampiny AppStream dia noforonina miaraka amin'ny kinova vaovao Python 3.9, SWIG 4.0, Subversion 1.14, Redis 6, PostgreSQL 13, MariaDB 10.5, LLVM Toolset 11.0.0, Rust Toolset 1.49.0 ary Go Toolset 1.15 .7.
Ny iso iso dia mamaha olana iray izay noteren'ny mpampiasa hiditra an-tanana ny URL fitaratra hampidina fonosana. Ao amin'ny kinova vaovao, ny installer dia misafidy fitaratra akaiky ny mpampiasa satria ny mpandraharaha dia nilaza fa vitsy ny fifamoivoizana mankamin'ny loharano CentOS RPM raha ampitahaina amin'ny
binary RPMs, noho izany dia heverin'izy ireo fa tsy mety ny mametraka an'ity atiny ity amin'ny fitaratra voalohany.
Raha te-hitaratra an'ity atiny ity ny mpampiasa dia afaka manao izany izy ireo amin'ny alàlan'ny baiko reposync azo alaina ao amin'ny fonosana yum / dnf-utils. Ny loharanom-baovao RPM dia voasonia miaraka amin'ny lakile mitovy amin'izany izay ampiasaina hanasoniavana ny mimari-droa.
Navoaka daholo ny fanavaozana hatramin'ny namoahana azy voalohany maritrano. Tena mamporisika ny mpampiasa rehetra izahay hampihatra ny fanavaozana rehetra
Mikasika ireo olana fantatra Voalaza fa rehefa mametraka an'ity kinova fanavaozana vaovao ity Ao amin'ny VirtualBox dia tsy maintsy misafidy ny maody "Server with GUI" ianao ary ampiasao VirtualBox tsy mihoatra ny 6.1, 6.0.14 na 5.2.34, satria raha tsy izany dia hisy ny olana.
Ankoatra izany, Ny RHEL 8 dia nanakana ny fanohanana ireo fitaovana enti-miasa mety mbola misy ifandraisany izany. Ny vahaolana dia mety amin'ny fampiasana ny kernel centosplus sy ireo sary iso nomanin'ny tetik'asa ELRepo miaraka amina mpamily fanampiny.
Ny fomba mandeha ho azy hanampiana AppStream-Repo dia tsy mandeha rehefa mampiasa boot.iso ary apetraka eo ambonin'ny NFS sy PackageKit dia tsy afaka mamaritra ny fiovana DNF / YUM eo an-toerana.
Finalmente raha te hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao Momba an'ity kinova vaovao ity dia azonao atao ny manamarina ny antsipiriany ao amin'ny rohy manaraka
Sintomy ny CentOS 8.4
Ary farany ho an'izay rehetra liana amin'ny fahaizana mametraka ity kinova vaovao an'ny rafitra ity tokony handeha amin'ny tranokalan'ny ofisialin'izy ireo ary amin'ny fizarana fampidinana anao dia azonao atao ny mahazo ny sarin'ny rafitra, ny rohy dia ity. Ity sary ity dia misy azonao ampiharina amin'ny milina ara-batana rehetra, ary koa amin'ny rindranasa hafa mamela ny famoronana milina virtoaly, toy ny VirtualBox na Gnome Boxes.
Ny fizarana dia mifanaraka tanteraka amin'ny RHEL 8.4 ka ny CentOS 2105 sy ny fananganana efa nomaniny dia vonona ny hisintona na ny sary DVD 8 GB na ny netoka 605 MB ho an'ny x86_64, Aarch64 (ARM64) ary ny maritrano ppc64le.
Ny fonosana SRPMS izay iankinan'ny binaries sy ny debugging information dia misy amin'ny alàlan'ny rohy manaraka
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » CentOS Linux 8.4 dia misy izao ary ireo no fanovana azy
Jami "Maloya" dia tonga miaraka amin'ny fanatsarana ny interface, ny fampiraisana ny mpanjifa ho an'ny Windows sy Linux ary maro hafa
Tonga ny Chrome OS 91 miaraka amin'ny fanohanana famindrana rakitra, fanatsarana ny fiarovana ary maro hafa